Top 5 Loại mặt nạ giấy tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Loại mặt nạ giấy tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Loại mặt nạ giấy tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ngaphansi kwethonya lemvelo, ukunakekelwa kwesikhumba kuyinto abantu besifazane abanesithakazelo kuyo ngokukhethekile. Isikhumba esibi noma izinduna zenza abesifazane balahlekelwe ukuzethemba ekukhulumeni.
Ukufaka imaski kuyindlela yokusiza ukugcwalisa imisoco ukuvikela isikhumba ngokufanele ukuletha isikhumba njengoba kuthanda. Ngakho imaski paper Iluphi uhlobo oluhle, oluthenjwa yizingane eziningi, mema abafundi ukuthi bathole esihlokweni esingezansi!
1 Mayelana namamaski eshidi
2 Yiziphi izinhlobo zamaski ezikhona?
2.1 Imaski yephepha engalukiwe
2.3 I-bio cellulose
3 Yiziphi izinkampani ezidumile zamamaski weshidi namuhla?
3.1 Imaski ye-Innisfree
3.2 Imaski ye-skiinfood
3.3 Imaski yephepha leVedette
3.4 Imaski yeshidi le-Banobagi
3.5 Imaski ye-Minoso
4 Imikhiqizo emi-5 ephambili yemaski yamaphepha abesifazane abethembayo
4.1 I-COKO NANOCELL I-Detox Mask enamaseli e-Bio Stem
4.2 I-Naruko Rjt Pore Imaski Enciphisa Futhi Ekhanyayo
4.3 I-Banobagi Vita Genic Jelly Mask 30ml x10
4.4 3W Umtholampilo Ishidi Lemaski Letiye Elisha Eliluhlaza 100% likakotini
4.5 I-Taiwan Magnolia Iyakhanya Futhi Iqinisa Imaski Ex
4.6 Okuhle nokubi
5 Indlela yokukhetha imaski yeshidi engcono kakhulu kuwe
5.1 Ifanele lonke uhlobo lwesikhumba
5.1.1 Isikhumba esizwelayo
5.1.2 Isikhumba sezinduna
5.1.3 Isikhumba esinamafutha
5.1.4 Isikhumba esihlanganisiwe
5.2 Ukukhiqizwa kwezithako
5.4 Imikhiqizo yomkhiqizo
Mayelana namamaski eshidi
Iphepha lokufihla ubuso Kungumkhiqizo wokunakekela isikhumba somsebenzi wobuso omanzisa. Ngempahla yephepha, indwangu kakotini emincane efakwe nesisombululo sobisi lokunakekelwa kwesikhumba, ijeli yengeza izakhi ezinenzuzo esikhumbeni njengomswakama, amaminerali, amavithamini, ….
Njengamanje, imaski yeshidi ihlale ithuthukiswa ukuze isize isikhumba simunce kangcono imisoco ukuze kuqinisekiswe umswakama ngesikhathi sokufaka isicelo. Ngokungafani namamaski emvelo, izifihla-buso zeshidi zisiza imisoco ukuthi ingene ijule esikhumbeni.
Yiziphi izinhlobo zamaski ezikhona?
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamamaski wephepha, okwenza kube nzima kubasebenzisi ukuhlukanisa imaski yephepha ejwayelekile. Kodwa-ke, imaski yephepha ingahlukaniswa ngezinhlobo ezilandelayo eziyinhloko:
Imaski yephepha engalukiwe
Indwangu engalukiwe iyinto evame ukusetshenziswa emakethe ukukhiqiza imaski yephepha. Kodwa-ke, le ndwangu inomkhawulo wokuthi ikhono lokuthutha izakhi ezivela kumaski kuya esikhumbeni liphansi. Ngenxa yalolu hlobo lwendwangu, izakhi kumaski ziyahwamuka ngokushesha futhi kunzima ukuzifaka esikhumbeni sobuso.
I-Lyocell noma i-tencel iyindwangu ephilayo eyenziwe ngemicu yoqalo yemvelo ephephile engabola. Ukuthungwa kwale ndwangu kuthambile kakhulu futhi akucasuli isikhumba, kufanelekile esikhumbeni esibucayi. Imaski ye-Biocell ithambile, imunca kakhulu kunokotini futhi icishe ibe sobala, igone ubuso ukuze idale ikhono lokuletha imisoco ebusweni bonke.
I-Bio cellulose iyimpahla yemvelo eyenziwe ngemicu ye-cellulose, ekhiqizwa ukuvutshelwa kwamanzi kakhukhunathi. I-Bio cellulose ekuqaleni yayisetshenziswa ekusetshenzisweni kwezokwelapha ukusiza ukwelapha ukusha namanxeba ngenxa yekhono layo lokugcina umswakama nokubopha isikhumba. Khona-ke i-Bio cellulose isetshenziswa ezimonyoni futhi lokhu kubuye kube yi-100% yezinto ezibolayo ezibolayo ezihambisana nemvelo.
Xem Thêm Top 7 chiếc tạp dề cho chị em Eva tốt nhất 2022 | Muasalebang
Yiziphi izinkampani ezidumile zamamaski weshidi namuhla?
Ngezinhlobonhlobo zezinhlobo, amabhrendi nezintengo, kunzima kubasebenzisi ukuthi bazikhethele imaski elungile. Ungabhekisela kubakhiqizi abalandelayo bemaski bephepha abalandelayo ukuze ukhethe umkhiqizo ofanele.
I-Innisfree wuphawu lwemaski yamaphepha oluvela ezweni likaKim Chi oluthandwa abesifazane abaningi ngomsebenzi wabo wamasonto onke wokunakekela isikhumba. Izithako ze-mask zikhishwa emvelweni njenge-rose, uju, itiye elihlaza, njll. Isendlalelo sephepha asisigqinsi kakhulu ukwenza kube ntofontofo ukuyisebenzisa, kodwa intengo ishibhile kakhulu.
I-Skinfood iwumugqa womkhiqizo wokunakekelwa kobuso ophephile futhi osebenzayo emakethe. Umkhiqizo ukhishwe ku-100% wemvelo, ulungile esikhumbeni, uhlangabezana nezidingo eziyisisekelo zokunakekelwa kwesikhumba. Imaski ihlangabezana nezidingo eziyisisekelo ezinjengokuthi: mhlophe, imihuzuko efiphalayo, i-bactericidal, i-moisturizing, … inomphumela omuhle kakhulu wethoni, ngakho-ke ithenjwa abesifazane abaningi.
Imaski yephepha leVedette
I-Vedette uhlobo lokunakekelwa kwesikhumba oluvela eVietnam olunezithako ezikhishwe emvelweni ezingena ngaphakathi, zisiza ukunakekela isikhumba ngokuphelele. Imikhiqizo ekhishwe ezithakweni eziningi zemvelo ezahlukene isiza abasebenzisi ukuthi bakhethe ngokuya ngokuthandwa nguwe. Ukusetshenziswa njalo kwe-mask kwenza isikhumba sinwebeka, sinempilo futhi sithambile. Ikakhulukazi intengo iyathengeka ephaketheni lomsebenzisi.
Imaski yeshidi le-Banobagi
Uhlobo lwe-Banobagi oluvela eKorea luthandwa ngabasebenzisi abaningi, luletha imiphumela ekhethekile yokunakekelwa kwesikhumba kunkinga ngayinye yesikhumba. Izithako ze-mask yemvelo zinomphumela wokuthambisa, ukuvuselela ukwakheka kwesikhumba, ukwengeza amavithamini namaminerali ukusiza isikhumba ukuba silingane, sikhanye futhi sihle. Intengo ejwayelekile isuka ku-25,000 iye ku-30,000 / umkhiqizo.
I-Minoso iwuphawu lwemaski oluhlonishwayo oluvela eJapan oluthenjwa ngamakhasimende. Umkhiqizo ukhishwa ngokuphelele esithelweni, amanzi e-rose, ubisi olusha ukusiza ukuthuthukisa umswakama wesikhumba, ukuvala umswakama ngokuphumelelayo. Izithako ze-mask zisiza ukunakekela isikhumba, ukukhuthaza impilo, nokudala umgoqo wokuvikela ukuvikela isikhumba emathonyeni ayingozi emvelo. Intengo ethengekayo yemaski ifanele abasebenzisi abaningi.
Imikhiqizo emi-5 ephambili yemaski yamaphepha abesifazane abethembayo
Usazibuza ukuthi yimuphi umkhiqizo wemaski weshidi ongawukhetha ukuze unakekele isikhumba esifanele? Bheka amamaski esikhumba ayi-5 aphezulu ngezansi:
I-COKO NANOCELL I-Detox Mask enamaseli e-Bio Stem
I-COKO wuphawu lwemaski yephepha oluvela e-Vietnam olusebenzisa ubuchwepheshe bokuvutshelwa kwamanzi kakhukhunathi kanye nobuchwepheshe be-Nano bebhayoloji ukwenza ifilimu enomongo wokondla isikhumba ovunyeleka kakhulu. Ifilimu ye-bio engaphakathi kwemaski ixubene ne-Essence yemvelo e-Swiss Alps naseJeju Island eKorea. Imaski ibiliswe nge-coconut yemvelo eyi-01 ngokuphelele, ngakho-ke ithandwa abantu abaningi ukuthi ithunyelwe emazweni amaningi njenge-Australia, America, Korea, njll. Umkhiqizo uthola ukubuyekezwa okuhle nokuphawula okuvela kumakhasimende.ama-blogger adumile.
Xem Thêm Điều hoà Daikin báo lỗi A5 | Muasalebang
Umkhiqizo unezendlalelo ezi-3 zokuswakama ukusiza ukumunca ngokushesha, izikhathi ezingama-20 ngempumelelo kunamaski avamile.
Imikhiqizo enomklamo osondelene, kulula ukuyisebenzisa, umklamo njengesikhumba sangempela esingafika ku-98%.
Izithako zemvelo ngokuphelele, eziphephile kubo bobabili abesifazane abakhulelwe nezingane ezineminyaka engu-6 ubudala.
Ngezithako ezifanele zokudla okunomsoco, intengo yomkhiqizo iphakeme kakhulu.
I-Naruko Rjt Pore Imaski Enciphisa Futhi Ekhanyayo
I-Naruko Rjt sheet mask iwumkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba wemvelo othuthukisa izindawo zesikhumba esimnyama. Izithako zemvelo zisiza ekwandiseni i-metabolism futhi zikhuthaze amangqamuzana esikhumba ukuthi avuseleleke, axoshe amabala amnyama, ama-radicals mahhala ukusiza ngisho nethoni yesikhumba. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo uhlanza ngokuphumelelayo i-sebum, uqinisa ama-pores, unciphisa ngokuphumelelayo induna esikhumbeni, uthuthukise ukuhlanzeka, uhlanze isikhumba. Intengo yomkhiqizo imayelana ne-190,000 VND / izingcezu eziyi-10.
Umphumela wokuhlanza we-mask weshidi uphezulu kakhulu ukususa ukungcola namaseli afile.
Yandisa umswakama ukuze igcine isikhumba sisisha futhi sikhazimula.
Isebenza kahle ekukhanyeni, isiza ithoni yemvelo yesikhumba.
Umkhiqizo awuklanyelwe ukugona ubuso, okwenza kube nzima ukuwusebenzisa.
I-Banobagi Vita Genic Jelly Mask 30ml x10
I-Banobagi Vita Genic Jelly Mask imaski yephepha eshibhile ikhishwa emvelweni enokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini. Umsoco ogxilile usiza ukuqinisa futhi ukhiqize i-collagen ukuze ivuselele amangqamuzana esikhumba ukuze aqine futhi anwebeka. Ngesikhathi esifanayo, kuthuthukisa umswakama wesikhumba, kusiza ukugcina isikhumba sisemusha, ngisho, silwa nokuguga, isikhumba esinyakazayo. Inhlanganisela yomkhiqizo ihlanganisa izinhlobo ezi-4: ukuphumula kunhlaba, ukudonsa amanzi ukuze ugcwalise umswakama, ukuphakamisa kusuka ku-cactus kuhlinzeka ngevithamini A kanye nokukhipha okuwolintshi kube mhlophe.
Ukuletha izinzuzo eziphelele zokunakekelwa kwesikhumba, ukuthuthukisa ukumhlophe, ukuqinisa, ukuphumula, imiphumela yokulwa nokuguga.
Umphumela ojulile, umphumela osheshayo esikhumbeni.
Imikhiqizo ekhishwe emvelweni, iphephile futhi isebenza kahle esikhumbeni somsebenzisi.
I-mask material yenziwe nge-rudimentary cotton, ebangela ubuhlungu kumsebenzisi.
3W Umtholampilo Ishidi Lemaski Letiye Elisha Eliluhlaza 100% likakotini
3W Clinic Fresh Green Mask Mask Sheet 100% Cotton umkhiqizo ophambili okhishwe etiyeni eliluhlaza. Ukwakhiwa kwe-mask kuyi-antibacterial, ukuvimbela uhla olusebenzayo lwamabhaktheriya abangela induna.
Kuhlanganiswe netiye eliluhlaza kunemiphumela ye-antioxidant, ukuqinisa imisipha yesikhumba, isikhumba esilwa nokuguga. Umkhiqizo waziswa kakhulu ngezinga lawo lokuphepha, unobungane kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, ukunciphisa okusebenzayo kwezinduna. Idizayini yomkhiqizo ehlangene, kulula ukuyiphatha ngokuhamba noma yebhizinisi. Intengo yomkhiqizo cishe i-70,000 VND / 10 izingcezu.
Umkhiqizo onomphumela we-antibacterial, ukwelashwa kwe-acne okuphumelelayo.
Khulisa umswakama wesikhumba ngemuva kwesicelo ngasinye.
Ikhono lokuvimbela ngempumelelo kanye nokulwa nezimpawu zokuguga.
Izithako ze-mask aziningi, ngakho-ke azisebenzi kakhulu ekusetshenzisweni kokuqala.
I-Taiwan Magnolia Iyakhanya Futhi Iqinisa Imaski Ex
Imaski yeshidi le-Taiwan Magnolia Brightening And Firming Mask Ex ikhishwa kwisithako esimhlophe se-ylang-ylang, ingqikithi yemvelo, ukuze kutholakale ukunakekelwa okuphelele kwesikhumba. Ikhono lokukhulisa umswakama, ukuvala umswakama ukusiza isikhumba siqine futhi sinwebeka. Kuhlanganiswe ne-collagen ukusiza ukuvuselela ukwakheka kwamangqamuzana esikhumba, ukulwa nokuguga, ukunqanda ukugoqa, imibimbi esikhumbeni.
Ngaphezu kwalokho, izakhi kumaski zisiza ukufiphaza amabala amnyama, amabala aphuzi esikhumbeni, agcwele ama-radicals mahhala ayingozi esikhumbeni. Lo mkhiqizo i-dermatologist ehloliwe futhi iphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. Intengo yomkhiqizo imayelana ne-210,000 VND/10 izingcezu.
Imaski inokunakekelwa kwesikhumba okusebenzayo kanye nomphumela omhlophe.
Ithuthukisa ikhono lokulwa nokuguga, isiza isikhumba sivuseleleke futhi siqine.
Iphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
Intengo yomkhiqizo emakethe iphezulu uma kuqhathaniswa.
Indlela yokukhetha imaski yeshidi engcono kakhulu kuwe
Ukuze kusetshenziswe kahle kakhulu imaski yephepha, abesifazane kudingeka banake ukuthenga imaski efanelekile. Lezi zindlela ezilandelayo zizokusiza ukuthi ukhethe umkhiqizo wemaski wephepha olungele wena:
Ifanele lonke uhlobo lwesikhumba
Into ebaluleke kakhulu ukusebenzisa imaski yeshidi efanele isekelwe esimweni sakho sesikhumba.
Isikhumba esizwelayo sizohlushwa izinduna, ukuqubuka nokucasulwa yizici ezifana nokucindezeleka, amahomoni, ukungcola, ukungcola, isimo sezulu, njll. Kufanele usebenzise imaski ekhishwe etiyeni eliluhlaza, i-lavender noma imikhiqizo Ecebile ngama-antioxidants ukuze udambise ububomvu.
Ukuze ugweme isikhumba esingenayo i-acne, kufanele ugweme izithako ezivala ama-pores ebusweni bakho. Isikhumba esinezinduna sidinga ukusebenzisa izithako ezithambisa isikhumba njenge rose, itiye eliluhlaza, uju, njll., okuyisinqumo esifanele.
Isikhumba esinamafutha siwuphawu lwesikhumba esintula umswakama, ngakho-ke sebenzisa imaski yeshidi enemisoco ekhishwe emafutheni alula njengejojoba namafutha esihlahla setiye ukusiza ukulinganisa isikhumba esinamafutha.
Abantu abanesikhumba esihlangene bavame ukuba ne-T-zone enamafutha ebusweni babo, kodwa ezinye izindawo ezifana nezihlathi zomile. Lapho ukhetha imaskhi yephepha yesikhumba esihlangene, udinga ukukhetha imaski ene-vitamin C ekhishwe, amakhambi, i-Collagen, ukunambitheka kwezithelo, …
Ulwazi lomkhiqizo lubhalwe ngokucacile emaphaketheni ephepha, ngakho abasebenzisi badinga ukufunda ngokucophelela ngaphambi kokuthenga. Udinga ukufunda ngokucophelela ukuthi isikhumba sakho sobuso asizwani nanoma yisiphi isithako emkhiqizweni. Kungcono ukukhetha imikhiqizo ekhishwe emvelweni enempilo futhi ephephile esikhumbeni.
Amamaski amaningi anokusetshenziswa okuhlukile njengokuthambisa, ukwenza mhlophe, ukuhlanza, ukukhipha, ukuqinisa izimbotshana njll.
Akuyona yonke imikhiqizo emakethe enemiphumela emihle. Ikakhulukazi imaski eshibhile, enemvelaphi engacacile, ayilethi ukwelashwa okuphumelelayo kwesikhumba kodwa futhi ilimaza isikhumba. Ngakho-ke lapho uthenga imaskhi yephepha, udinga ukunaka ukukhetha imikhiqizo enegama, ethenjwa abesifazane abaningi, enokubuyekezwa okuhle emakethe. Noma ungayithenga kuma-showroom ahloniphekile nasezitolo zokusabalalisa.
Ehlobo elishisayo, awukwazi neze ukuntula imaski yaphezulu ukusiza ukubuyisela kanye nokwenza isikhumba sakho sibe mhlophe. Kwaphezulu 5 best sheet mask ngenhla sincoma I-Naruko Rjt Pore Imaski Enciphisa Futhi Ekhanyayo. Ukusebenzisa imaski efanele kukusiza ukuba ube nesikhumba esimhlophe esikhanyayo njengoba kulindelekile futhi ukhanye ngokuzethemba.
(Kuvakashelwe izikhathi eziyi-1,358, ukuvakashelwa okungu-13 namuhla)
Tổng hợp 10 cách làm sushi cuộn hấp dẫn, dễ ăn đơn giản tại nhà | Muasalebang
[Review] Tẩy da chết Quế Hồi có tốt không? Giá bao nhiêu? | Muasalebang